Iimfazwe ezi-4 ezidlulileyo zohlobo lwe-Survivor Series brand brand - Wwe
Iimfazwe ezi-4 ezidlulileyo zohlobo lwe-Survivor Series brand brand
Yilelo xesha lonyaka kwakhona kwiWWE. Idabi lokuphakama kwegama lophawu lusethelwe ukuba nomsindo kwakhona njengoko iimveliso zeWWE ziya kujongana ngokuchasene eSurvivor Series ngoNovemba 24.
Umnyhadala walo nyaka uphawula unyaka wesine othe ngqo apho imiboniso yeveki ye-WWE ijongene nayo, kunye nohlelo lwe-2019 longeza into eyongezelelweyo ngokufakwa kwe-NXT kumxube. Uphawu lwesithathu lweWWE luya kujonga ukuqinisa indawo yabo ngeRAW kunye neSmackDown, kwaye nangaphezulu kwenkqubo yophuhliso.
Ukubandakanyeka kweNqaku leMnyama neGolide kuye kwachaza ifomula ye-WWE kudala ifakiwe, nangaphambi ko-2016 Brand Split.
indlela yokuphila ngalo mzuzu
Sijoyine njengoko sijonga amaxesha amane edlulileyo i-WWE isebenzisa imfazwe yohlobo lwe-Survivor Series.
Uluhlu lwe- # 4 lokusinda ngo-2005
I-Series Survivor Series 2005: URandy Orton wayengoyena usindileyo eSmackDown
Kuhlala kulityelwe ukuba iWWE yenze ifomathi yeRAW vs SmackDown ngaphambili, kudala ngaphambi kweminyaka emine elandelelanayo yabalandeli bemfazwe yohlobo.
I-angle eshushu ngasekupheleni kuka-2005 yayiyeyona nto ibalulekileyo yokuzibandakanya phakathi kweRAW kunye neSmackDown okoko i-brand yoqobo yahlulwa ngo-2002.
Emva kweeveki zokuhlaselwa kwabo bobabini oorosta, Abaphathi Jikelele u-Eric Bischoff kunye noTeddy Long bavumile ngokungqubana okubini ngobukhulu bebhrendi- enye ibe yeyesi-5 ukuya kwe-5 yemveli yokuSinda kwiMidlalo phakathi komdlalo obalaseleyo, kunye nomnye- kukhuphiswano olunye phakathi kweBischoff kunye neLong.
Ulwakhiwo kumnyhadala lwalonakaliswe ngokudabukisayo kukusweleka kukaEddie Guerrero, owayecwangciselwe ukuba yinxalenye yeQela leSmackDown. Ngaphandle kwezi meko zingathandekiyo, amaqela amabini aneenkwenkwezi ahlanganiswa kunye neqela leBlue Brand's intshatsheli iBatista ejolise kuyo rhoqo kwiiveki eziphambi koluhlu lwe-Survivor Series yi-RAW Tag Team Champions Kane kunye neBig Show.
Yayiliqhinga lokuba iQela RAW liza kuthatha nabo ukuya kumsitho ophambili weSurvivor Series, kunye 'nesilwanyana' eyindoda yesithathu esuswe emdlalweni. Ngaphandle koku, i-SmackDown kungekudala izakufumana isibonelelo se-3-1 sikaRandy Orton, Rey Mysterio kunye noJBL kwiRAW's Shawn Michaels.
Ngendlela eqhelekileyo ye-HBK, wayeza kulwa nobunzima ukuphelisa uRey noBradshaw ngokulandelelana ngokukhawuleza ngaphambi kokuba ekugqibeleni bawele e-Orton. Kwakucacile kwakamsinya ukuba le mpumelelo ye 'The Viper' yenziwa ukuba isebenze njengendawo yokuqhubeka komlo wakhe unyaka nonyaka no-Undertaker. 'Umntu oFileyo' wayeza kubonakala ejongana no-Orton ekupheleni komboniso, njengoko 'iViper' yayibanjwe phezulu yilo lonke uluhlu lweSmackDown.
Kuthekani ngeBischoff xa ithelekiswa neLong? Ewe, ihlale imizuzu emihlanu ngokuphumelela ixesha elide emva kokuphazanyiswa yiBoogeyman.
Inyani eyonwabisayo Amalungu amathathu eQela eliNcinci- uBobby Lashley, u-Orton kunye noMysterio-basengamalungu erosta esebenzayo.
RAW vs amanqaku eSmackDown: 2-0 ukuya kwiSmackDown
ilitye elibandayo likaSteve austin
UTeddy Long woyisa uEric Bischoff
Iqela leSmackDown (iBatista, uBobby Lashley, i-JBL, uRandy Orton kunye noRey Mysterio) boyisa iQela RAW (iBig Show, uCarlito, uChris Masters, uKane noShawn Michaels)
uBobby heenan kunye nemvula yegorila
sayina loo ntombazana inomdla kuwe
isikhokelo sam somoya sikhangeleka njani
izimanga ezintle onokuzenzela intombi yakho
Ngomhla wangoMvulo ngoSeptemba 21
ndiyathanda ukuhlala ekhaya ngalo lonke ixesha